Tianao ve ny Hahafantatra ny Marina? | Tenin’ny Tanana Malagasy (TTM)
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abua Acholi Afrikaans Ahanta Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Altaï Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Ateso Attié Awajun Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuuk Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dari Digor Diola Douala Drehu Dusun Efik Ekosey Gaelika Emberá (Catío) Espaniola Estonianina Failandey Fante Fataluku Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Fulfulde (Cameroun) Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gitonga Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guarani (Bolivia) Guna Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Hopi Huaxtèque (San Luis Potosi) Hunsrik Iakoutsk Ibinda Ibo Icibemba Iloko Inakeanon Indonezianina Iokrenianina Irlandey Islandey Isoko Italianina Itsékiri Iu Mien Ivatan Japoney Jiwaka Jula Kabarde-Tcherkesse Kabiyè Kabyle Kachin Kadazan Kalanga (Botswana) Kalenjin Kamayo Kambôdzianina Kannada Kariba Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinaray-a Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Kongo Konkani (Devanâgarî) Konkani (Romanina) Koreanina Kosrae Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Sainte-Lucie Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kryashen Kuhane (Subiya) Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kurde Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Luxembourgeois Macua Madi Makasae Makhuwa-Meetto Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mangareva Manipuri Manyawa Maori Mapudungun Marathe Mari Marquisien (Hiva Oa) Marquisien (Nuku Hiva) Marshall Masedonianina Mashi Maya Mayangnan Mayo Mazahua Mazateky (Huautla) Mbukushu Mbunda Melpa Mentawei Miskito Mixe Mixtèque (Guerrero) Mixtèque (Huajuapan) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Nama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nicobar Niue Norvezianina Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pachtou Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pemon Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Piaroa Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Pilagá Poloney Poméranien Ponape Portogey Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Chibuleo) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Quiché Rapa Nui Rarotonga Romanianina Rosianina Rungus Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Romania) Samoanina Sango Saramaccan Sarnami Sena Sepedi Sepulana Serba Serba (Soratra Romanina) Serer Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Shuar Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tarahumara Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Albaney Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Boligara Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Danoà Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Estonianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Letonianina Tenin’ny Tanana Litoanianina Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Norvezianina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Touva Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Voru Wallis Warao Waray-Waray Wayuunaiki Wichi Wolaita Wolof Xhosa Yacouba Yap Yorobà Yukpa Yupik any Alaska Afovoany Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Guevea) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa Édo Éwé
Tianao ve ny Hahafantatra ny Marina?
NY MARINA momba ny inona? Momba ireo fanontaniana lehibe indrindra nanahiran-tsaina ny olona hatramin’izay. Angamba ianao efa nieritreritra hoe:
Tena miahy antsika ve Andriamanitra?
Hifarana ve ny ady sy ny fijaliana?
Inona no manjo ny maty?
Mbola hahita ny havantsika efa maty ve isika?
Ahoana no ahazoako valim-bavaka?
Aiza no hitadiavanao ny valin’ireo? Mety hahita boky maro be manome ny valin’ireo ianao. Matetika anefa no mifanohitra ny zavatra lazain’izy ireny. Misy indray toa milaza ny marina, saingy vetivety dia lany andro, ka havaozina na soloana.
Misy boky iray manome valiny azo itokisana anefa. Milaza ny marina foana izy io. Hoy i Jesosy Kristy rehefa nivavaka tamin’Andriamanitra: “Ny teninao no fahamarinana.” (Jaona 17:17) Ny Baiboly Masina no iantsoana an’io Teny io ankehitriny. Ho hitanao ato ny ampahany amin’ny valiny marina sy mazava omen’ny Baiboly amin’ireo fanontaniana etsy ambony.
ANTON’ILAY FANONTANIANA: Feno habibiana sy tsy rariny eto amin’ity tontolo ity. Misy fivavahana milaza fa sitrapon’Andriamanitra ny hijaliantsika.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Tsy manao ratsy mihitsy Andriamanitra. Hoy ny Joba 34:10: “Sanatria an’ilay tena Andriamanitra ny hanao ratsy, ary sanatria an’Ilay Mahery Indrindra ny hanao ny tsy rariny!” Misy zavatra tsara kosa aza kasainy hatao ho an’ny olona, noho ny fitiavany. Izany no antony nampianaran’i Jesosy antsika hivavaka hoe: “Rainay izay any an-danitra ... Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” (Matio 6:9, 10) Tena miahy antsika Andriamanitra, ka niasa mafy mba ho tanteraka ny fikasany.—Jaona 3:16.
Jereo koa ny Genesisy 1:26-28 sy ny Jakoba 1:13 ary ny 1 Petera 5:6, 7.
ANTON’ILAY FANONTANIANA: Mamono olona maro tsy tambo isaina ny ady hatramin’izao. Misy fiantraikany eo amintsika rehetra koa ny fijaliana.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Mampanantena Andriamanitra fa hataony izay hisian’ny fandriampahalemana eran-tany. Tsy “hianatra ady intsony” ny olona, eo ambany fahefan’ilay Fanjakany any an-danitra. “Hanefy ny sabany ho angadinomby” izy ireo. (Isaia 2:4) Hanafoana ny tsy rariny sy ny fijaliana rehetra Andriamanitra. Mampanantena ny Baiboly hoe: “Hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.” Anisan’izany ny tsy rariny sy ny fijaliana misy ankehitriny.—Apokalypsy 21:3, 4.
Jereo koa ny Salamo 37:10, 11; 46:9 sy ny Mika 4:1-4.
ANTON’ILAY FANONTANIANA: Milaza ny ankamaroan’ny fivavahana fa misy fanahy mbola velona ao anatin’ny olona, rehefa maty izy. Misy mino fa afaka mitahy na manisy ratsy ny velona ny maty. Misy koa mihevitra fa manasazy ny ratsy fanahy Andriamanitra, ka mandefa azy any amin’ny afobe mba hijaly mandrakizay.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Tsy misy aina intsony ny olona rehefa maty. Tsy afaka mandre, na mahita, na miteny, na mieritreritra izy. Hoy ny Mpitoriteny 9:5: “Ny maty ... tsy mahalala na inona na inona.” Noho izany, dia tsy afaka manisy ratsy ny velona na manampy azy ny maty.—Salamo 146:3, 4.
Jereo koa ny Genesisy 3:19 sy ny Mpitoriteny 9:6, 10.
ANTON’ILAY FANONTANIANA: Tiantsika ny ho velona sy hankafy ny fiainana miaraka amin’ny havana aman-tsakaizantsika. Ara-dalàna raha maniry mafy hahita indray ny havantsika efa maty isika.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Hatsangana amin’ny maty ny ankamaroan’ny olona nodimandry. Nampanantena i Jesosy fa ‘hivoaka ny olona any am-pasana.’ (Jaona 5:28, 29) Ho afaka hiaina ao amin’ny paradisa an-tany izy ireo, araka ny fikasan’Andriamanitra tany am-boalohany. (Lioka 23:43) Fahasalamana tonga lafatra sy fiainana mandrakizay no miandry ny olona mankatò. Hoy ny Baiboly: “Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”—Salamo 37:29.
Jereo koa ny Joba 14:14, 15 sy ny Lioka 7:11-17 ary ny Asan’ny Apostoly 24:15.
ANTON’ILAY FANONTANIANA: Saika ny olona avy amin’ny fivavahana rehetra no mivavaka. Maro anefa no mahatsiaro ho tsy mahazo valiny.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Nampianatra antsika i Jesosy, mba tsy hanao tsianjery fotsiny rehefa mivavaka. Hoy izy: “Rehefa mivavaka ... ianareo, dia aza mamerimberina zavatra mitovy foana.” (Matio 6:7) Tsy maintsy ampifanarahina amin’izay ankasitrahan’Andriamanitra ny vavaka, mba hohenoiny. Noho izany, dia mila fantarintsika ny sitrapony, ary ataontsika mifanaraka amin’izany ny vavaka ataontsika. Hoy ny 1 Jaona 5:14: “Na inona na inona angatahintsika ka mifanaraka amin’ny [sitrapon’Andriamanitra], dia mihaino antsika izy.”
Jereo koa ny Salamo 65:2 sy ny Jaona 14:6, 14 ary ny 1 Jaona 3:22.
ANTON’ILAY FANONTANIANA: Maro no mino fa mahasambatra ny vola sy ny laza ary ny hatsaran-tarehy. Noho izany, dia miezaka izy ireo mba hanana an’ireo. Tsy sambatra akory anefa izy avy eo.
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Nasehon’i Jesosy hoe inona no tena mahasambatra. Hoy izy: “Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.” (Matio 5:3) Tsy tena ho sambatra isika, raha tsy miezaka hahazo ny zava-dehibe indrindra ilaintsika, dia ny fahalalana ny marina momba an’Andriamanitra sy ny fikasany momba antsika. Ao amin’ny Baiboly no misy an’izany marina izany. Rehefa fantatsika izany, dia ho haintsika ny hamantatra izay tena zava-dehibe sy tsy zava-dehibe. Hisy dikany kokoa ny fiainantsika, raha manaraka ny marina voalaza ao amin’ny Baiboly isika, rehefa hanapa-kevitra na hanao zavatra hafa.—Lioka 11:28.
Jereo koa ny Ohabolana 3:5, 6, 13-18 sy ny 1 Timoty 6:9, 10.
Ampahany kely amin’ny valin’ny fanontaniana enina omen’ny Baiboly no hitantsika teo. Mila fanazavana bebe kokoa ve ianao? Azo antoka fa izany no izy, raha anisan’ireo “mahatsapa fa mila an’Andriamanitra” ianao. Mety ho tianao ho fantatra, ohatra, hoe: ‘Raha miahy antsika Andriamanitra, nahoana no navelany hisy faharatsiana sy fijaliana be dia be hatramin’izay? Ahoana no hanatsarako ny fifandraisanay mianakavy?’ Manome valiny feno sy mahafa-po amin’ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa ny Baiboly.
Maro anefa no misalasala handinika azy io. Lehibe loatra, hono, izy io ary sarotra azo izay lazainy indraindray. Mila fanampiana àry ve ianao, mba hahitanao ny valim-panontanianao ao amin’ny Baiboly? Afaka manampy anao ny Vavolombelon’i Jehovah.
Azony omena anao ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? Natao ho an’ny olona be atao izy io, mba hanampiana azy hahita ny valiny mazava omen’ny Baiboly amin’ny fanontaniana lehibe sasany. Manasa ny olona hiara-mianatra Baiboly aminy maimaim-poana koa ny Vavolombelon’i Jehovah. Azo atao any an-tranonao izany, na any amin’ny toerana tianao. Vavolombelona efa za-draharaha sy mipetraka tsy lavitra anao, no hiara-midinika ny Baiboly aminao mandritra ny fotoana fohy isan-kerinandro. Nahasoa olona an-tapitrisany eran-tany izany. Maro no niaiky mihitsy hoe: “Nahita ny fahamarinana aho!”
Ny fahamarinana ara-baiboly no zava-tsarobidy indrindra. Noho izy io, dia afaka amin’ny finoanoam-poana sy ny tahotra isika, tsy very hevitra, manana fanantenana sy tanjona, ary faly. Hoy i Jesosy: “Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo.”—Jaona 8:32.
Hizara Hizara Tianao ve ny Hahafantatra ny Marina?
Soratra Fandikana sary sy soratra Tianao ve ny Hahafantatra ny Marina?
Video Fandikana video Tianao ve ny Hahafantatra ny Marina?